musha nyika dzakabatana Michael Phelps Yevacheche Nyaya Yenyaya Uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Michael Phelps Biography inokuudza chokwadi nezve rake rehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki (Michael Fred Phelps naDeborah Sue Phelps), Mhuri, Muroora (Nicole Johnson). Moreso, mutambi Sista (Whitney naHilary), Hupenyu Hwega, Mararamiro, Mari uye net kukosha.
Kuti tiite ipfupi Biography yedu, tinokupa iwe yakazara mufananidzo weiyo Hupenyu nhoroondo yaMichael Phelps, muAmerican aikwikwidza kushambira. Yedu nyaya inotanga kubva panguva yake yekuzvarwa kusvika ave simba rekutarisa munyika yemitambo.
Kuti uwedzere rudo rwako rweBiography yedu, tinopa nzira yemitambo yezviitiko zvakakomberedza nhoroondo yeupenyu hwaMichael Phelps. Pasina mubvunzo, iyo mifananidzo yaunoona pazasi inopfupikisa nhoroondo yeiyo yemhanyi.
Ehe, iye anozivikanwa zvakanyanya seiye akashongedzwa zvikuru weOlympian wenguva dzese. Ane menduru makumi maviri nemasere eOlimpiki, makumi maviri nemaviri acho egoridhe, akatenderera mana maOlympic Games. Kunyangwe akarumbidzwa, vashoma chete veMitambo vanofarira vakaverenga chidimbu chipfupi cheMichael Phelps's Biography.
Naizvozvo, isu takaiona seyakanaka kuti ikushandire iwe inonakidza nyaya yaMichael Phelps. Zvakare, iko kuparara kwechiitiko chake chemitambo kusvika parizvino. Zvino, pasina kunonoka, ngatitangei.
Michael Phelps Yemwana Nhau:
Kutanga, Michael Fred Phelps II akasvika pasi pano neSvondo yakanaka pazuva rechimakumi matatu raJune 30. Akazvarwa kuna Deborah Sue "Debbie" Phelps (nee Davisson) nababa vake, Michael Fred Phelps.
Nhoroondo yedu yeAmerica yaive yekuzvarwa muguta rine vanhu vazhinji mudunhu reUS Maryland, rinozivikanwa seBaltimore.
Zvakare, Michael Phelps akazvarwa pakati pehanzvadzi dzake mbiri (Whitney naHilary). Ivo vese vakatorwa kubva kumubatanidzwa wababa vavo, Michael Fred Phelps naamai, Deborah Sue Phelps, vane mifananidzo inoratidzwa pazasi.
Tarira Michael Phelps Vabereki - amai, Deborah Sue Phelps nababa, Michael Fred Phelps.
Vabereki vaMichael Phelps vakamukwidza munharaunda yeRodgers Forge yeTowson iri padhuze. Iyo nharaunda iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwechigaro chedunhu reBaltimore County, Maryland. Zvisinei, vabereki vake vakarambana mu1994 paakanga aine makore mapfumbamwe ekuberekwa.
Nekudaro, baba vake vakaroorazve muna 2000. Phelps akazotsanangura kuti kurambana uku kwakamukanganisa iye nehama dzake. Saka nekudaro, hukama hwake nababa vake hwaive kure kwemakore mashoma mushure mekurambana. Kunze kwezvose izvozvo, Phelps akatanga kushambira pazanomwe.
Michael Phelps akakurira padziva repahombe. Akashambira mangwanani, pamwe nekuda kwekufurira kwehanzvadzi dzake. Nekuti akashambira sezvo aigona kufamba. Saka, aive pamisangano yekushambira nguva dzese. Mutambo uyu waive wekuburitsa simba rake. Akakurira mukati maro.
Iyo pix yehucheche yaMichael Phelps nehanzvadzi dzake.
Phelps akataura kuti chikonzero chete chaakambopinda mumvura chaive amai vake. Aida kuti adzidze kushambira. Kunyange zvakadaro, hanzvadzi dzake uye akadanana nebasa iri uye akashambira. Nehurombo, akaonekwa aine hushoma hwekushomeka kwehutano kusagadzikana (ADHD).
Michael Phelps aive mugiredhi rechitanhatu panguva yekuongororwa. Na10, akawana chinzvimbo chenyika chezera rake (mune 100-mita shavishavi).
Nekudaro, iye akadzidzira kuNorth Baltimore Aquatic Club pasi pemurairidzi Bob Bowman. Mamwe mazera ebudiriro ebudiriro akatevera, uye kubva pazuva re21st Nyamavhuvhu 2018, Phelps achiri akabata gumi nerimwe zera rekodhi, zvisere munzira refu uye matatu munguva pfupi.
Michael Phelps Mhuri Yemashure:
Mhuri yePhelps yanga isiri mamirionea. Nekudaro, ivo vaigona kugadzikana kupa zvavanoda ivo pachavo. Baba vaMichael Phelps, Michael Fred Phelps, anogara pamudyandigere Maryland State Trooper.
Zvichakadaro, amai vake, Deborah Sue "Debbie" Phelps, mukuru wepakati chikoro. Saka vaive mhuri yepakati nepakati asi vaishanda nesimba.
Michael Phelps Mhuri Kubva:
Debbie Phelps, amai vaMichael, akakurira muWesternport. Westernport inharaunda iri muAllegany County, Maryland, US, pamwe neGeorges Creek Valley. Zvichakadaro, Fred Phelps, baba vake, akakurira mamaira kure muLuke.
Idzi nzvimbo mbiri dziri muPiedmont, kuyambuka Potomac muWest Virginia, US. Vabereki vaMichael Phelps vese vaibva kuAllegany County kumadokero kweMaryland.
Zvakare, Phelps izita reChirungu. Iro zita rakatanga senge patronymic fomu yezita rekuti Philip. Vakatora Firipi kubva mushoko rechiGiriki rekuti Philippos, rakaumbwa nezvinhu zviviri: yekutanga, philein, "kuda"; yechipiri, mvuu, "bhiza".
Takawana Duramazwi reAmerican Mhuri Mazita rinoti zita rekuti Phelps riri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweEngland. Zvakangodaro, Michael Phelps akaberekerwa muguta rine vanhu vazhinji kuMayland, Baltimore, US. Mufananidzo uri pazasi unotsanangura mhuri yaMichael Phelps.
Nekudaro, Phelps ndeyeMixed dzinza. Ane chirungu, chiGerman, chiIrish, chiScotland, uye chizvarwa cheWales. Rudzi rwake rwakavhenganiswa runogona kunge rwunobva kuhukama hwababa naamai.
Haven akataura zvese izvozvo; Michael Phelps chizvarwa cheBaltimore, Maryland. Mufananidzo wemufananidzo wemhuri yemhuri yaMichael Phelps uri pazasi.
Mufananidzo unoratidza Mhuri yaMichael Phelps mabviro.
Michael Phelps Ekutanga Basa:
Phelps akakurira mumhuri inofarira mitambo yemvura. Michael akabatana nepamusoro peNorth Baltimore Aquatic Club pazera remakore manomwe. Uyezve, akave akanaka mumutambo wemvura nekukurumidza. Micheal akapedza wechishanu mu200-mita butterfly mumitambo yeOlympic yeSydney ya2000.
Muna 2001, kuUS chitubu nyika, Michael Phelps akabuda ari wechidiki mubati wepasi rose mujaho wevarume aine gumi nemashanu. Akaita 15 min 1 sec mune 54.92-mita shavishavi.
Gare gare gore iro, akaenda kunohwina mukombe wake wekutanga wepasi rese muFukuoka, Japan, pamakwikwi epasi rose. Akatora menduru shanu kumakwikwi ePan Pacific muna 5, kusanganisira 2002 yegoridhe (mazana maviri emamita uye mazana mana emamiriyoni medley uye mana × 3-mita medley relay).
Mudiki Phelps anokunda rake rekutanga zita renyika dzakawanda muFukuoka, Japan.
Zvakare, muna2003 kuUS chitubu nyika, akave wekutanga murume kuhwina mazita mumaradhi matatu akasiyana single pamakwikwi enyika.
Pamusoro pezvo, akazoputsa zvinyorwa zvishanu zvepasirese kumakwikwi eWorld Barcelona kuSpain. Iye zvakare akatora mazita mashanu kuUS zhizha nyika. Michael akabheja akakunda zvakanyanya nemurume pachiitiko chimwe chete.
Michael Phelps Dzidzo:
Aimbove anokwikwidza kushambira akaenda kuzvikoro zvitatu. Akatanga kuenda kuna Rodgers Forge Elementary, kozoti Dumbarton Middle School. Chikoro chake chepamusoro chakaitirwa muTowson High Chikoro. Zvikoro izvi zvitatu zvaive chikamu cheBaltimore County Public Schools system.
Michael Phelps akapedza kudzidza kuTowson High Chikoro muna 2003. Zvisinei, akanonoka zvirongwa zvekoreji kutarisisa kudzidziswa kwemaOlympics a2004. Asi ipapo, muna Kubvumbi 2004, Bowman akazova murairidzi mukuru kuYunivhesiti yeMichigan.
Phelps akatanga kutora makirasi achidzidziswa pasi paBowman. Kunyangwe iye asina kutevera dhigirii repamutemo, akadzidza kushambadzira kwemitambo uye manejimendi. Phelps zvakare akashanda semubatsiri mudzidzisi wekuzvipira.
Michael Phelps akapedza kudzidza kuTowson High Chikoro mu2003.
Michael Phelps Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Phelps akapinda mumitambo yeOlympic muAthens, Girisi muna2004. Akatora menduru nhanhatu dzegoridhe nemenduru mbiri dzebronze. Chimwe chiitiko chaive chemarudzi ega ega asi mamwe aive emitambo yekumhanya. Zvekare, iyo Champ yakashambira mumitambo yekumisikidza nechikwata.
Olimpiki muAthens, Greece muna 2004, uko Phelps akabata menduru nhanhatu dzegoridhe nemenduru mbiri dzebronze.
Pamitambo muBeijing, China muna 2008, Phelps aida kutyora rekodhi yakagadzwa naMark Spitz mumitambo yeOlympic ya1972. Spitz akakunda menduru nomwe dzegoridhe gore iro. Tarisa, Phelps akatyora mucherechedzo nekutakura menduru sere dzegoridhe.
Michael Phelps, mukuwedzera, akaputsa iyo 200m Freestyle World Record paBeijing 2008 Olympic Games. Ona clip pazasi.
Iyo mitambo yaive mazana mana-mita medley medley, iwo mana × 400-mita freestyle relay. Zvakare, iyo yemamita mazana maviri yakasununguka, iyo 100-mita shavishavi. Zvekare, iyo ina × 200-metre freestyle relay, iyo 200-mita yemunhu medley, iyo 200-mita shavishavi.
Pakupedzisira, mukuwedzera, iyo ina × 100-mita medley relay. Michael Phelps akagadza zviyero zvepasi rose mune zvese asi imwechete (iyo 100-mita shavishavi) yezviitiko zvake zvegoridhe-menduru-anokunda.
Phelps akaputsa rekodhi yakatarwa naMark Spitz paMitambo muBeijing, China, muna 2008.
Michael Phelps Biography - Kumuka Mukurumbira:
KuOlimpiki muLondon, England mu2012, Phelps akabuda semurume wekutanga kuhwina chiitiko chimwechete kumaOlympics matatu akateedzana.
Phelps akazviita kumadzinza maviri, iwo mazana maviri emamirimita medley, kozoita shavishavi yemamita zana. Zvisinei, akatora mamwe menduru nhanhatu, kusanganisira menduru yegoridhe muchiitiko chake chekupedzisira, mana × 200-mita medley relay.
Michael Phelps achishanda neimwe yekurova kwake kwekukunda kumaOlimpiki muLondon, England mu2012.
Michael akazivisa kuti ave kuenda pamudyandigere mushure memitambo yeOlympics ya2012, asi akadzokera kumakwikwi muna 2014. Aive mutakuri wemureza weAmerica kumhemberero dzekuvhura Mitambo yeOlympic yeRio de Janeiro muna2016.
Mutambo uyu waive wake wechishanu Game kumisikidza chiyero chemuAmerican murume anoshambira. Kwakave kuratidzika kwake kwekupedzisira mumaOlympics. Ona zvidimbu pazasi.
Ikoko Phelps akawedzera kunhamba yake yemenduru nekuhwina goridhe mu200-mita IM, ina × 100-mita medley relay, ina × 100-mita freestyle relay, uye ina × 200-mita freestyle relay uye sirivheri mune 100-mita shavishavi .
Yakanga iri goridhe rake muchiitiko chekusaina, iyo 200-mita butterfly iyo yakabata yakanyanya kutarisirwa pasi rese.
Michael Phelps akahwina menduru shanu dzegoridhe uye sirivheri imwe kuti ave mutambi akashongedzwa kwazvo munhoroondo yeOlympic. Mushure mekupedza kudzoka kwake kukuru paMitambo ya2016, Phelps zvakare akarega basa kubva pamakwikwi ekushambira.
Phelps achipopota mukuhwina kwemimwe mishanu menduru dzegoridhe, imwe sirivheri, kuve mutambi akashongedzwa kwazvo munhoroondo yeOlympic.
Michael Phelps Kufambidzana ndiani?:
Wechidiki chap anga aine nguva dzake maererano nehukama hwake. Musi wake wekutanga aive Stephanie Rice, wekuSwimmer wekuAustralia, mu2008. Zvisinei, hukama hwacho hwakagara kwenguva pfupi. Zvakamutungamira mune zvimwe zvinhu zvakawanda. Mamwe mazuva ake anosanganisira Caroline Pal akapera muna 2009.
Muna 2010, Brittny Gastineau, muAmerican Socialite, anga aripo. Ipapo akasangana naCarrie Prejean, weAmerican Model. Zvichida achiri kusagutsikana, akaenderera mberi neAmerican Model, Megan Rossee, mu2012.
Zvakare zvehupenyu hupfupi, Michael Phelps asingaregi akasangana neAmerican TV Hunhu, Win McMurry, muna 2013. Zvakare, chikepe chakapunzika asi kuunza Nicole Johnson, waakasangana naye mu2014.
Phelps akaroora aimbova Miss California USA, Nicole Johnson.
Zvimwe pamusoro paNicole Johnson:
Nicole Michele Johnson Phelps muAmerican modhi uye runako mambokadzi. Aive Miss California USA muna 2010 uye akakwikwidza mumakwikwi eMiss USA. Nicole akazvarwa pazuva re12th raJuly 1985.
Johnson ndiye mwanasikana waAnnette, mudzidzisi wesainzi. Baba vake, Richard, maneja wekutengesa mishonga. Iye akazvarwa muColorado asi akapedza hudiki hwake muPennsylvania. Pamberi, mhuri yakatamira kuWestlake Village, California.
Akapedza kudzidza muna 2003 kubva kuWestlake High School. Muna 2007, Johnson akapedza kudzidza nemayunivhesiti kubva kuYunivhesiti yeSouth California. Akawana Bachelor of Arts muKutaurirana, achitarisana nemitambo uye varaidzo.
Michato yaMichael Phelps naNicole Johnson ine, nevana vatatu.
Nicole Michele Johnson akapfimbwa naMichael Phelps muna Kukadzi 2015. Ivo vaviri vakatanga kusangana paESPN Mibairo muna 2007. Vakatanga kufambidzana muna 2009 asi vakamboparadzana kwenguva pfupi pamberi peMitambo yeOlympics ya2012 vasati vasanganazve muna 2014.
Michato yaMichael Phelps naNicole Johnson ine, nevana vatatu. Muchato wakaitika muchivande munaJune 2016, mushure mekuzvarwa kwemwana wavo wekutanga.
Mwanakomana wavo, Boomer Robert Phelps, akazvarwa pazuva re5th raMay 2016. Zvino mwanakomana wechipiri, Beckett Richard Phelps, muna Kukadzi 2018. Mwanakomana wechitatu, Maverick, akaberekwa munaGunyana 2019.
Michael Phelps neVanakomana vake - Boomer, Beckett uye Maverick.
Michael Phelps Hupenyu Hwemhuri:
Phelps anobvuma kuti vabereki vake vakapfuudza magene akanaka. Vabereki vake vane basa rakakomba maitiro. Kunyangwe kupatsanurwa kwevabereki vake, hukama hwehukama huripo pakati pavo. Michael Phelps akafarira rutsigiro rwakakura kubva kumhuri yake.
Vanga vachichinja nzira dzekumhanya pamwechete uye kuyambuka-kudzidzisa mudziva, izvo zvinoita kuti zvinhu zvinakidze. Michael Phelps 'Biography yaizove isina kukwana vasina ivo. Heano maitiro ehupenyu hwenhengo yega yega yemhuri yake.
Tarisa maPhelps - Michael ane mhamha nehanzvadzi dzake.
Zvizhinji Nezve Michael Phelps Baba - Michael Fred Phelps II:
Baba vaMicheal, Fred, havawanzoonekwa pamberi pevanhu. Haana kupindira muhupenyu hwemwanakomana wake uye basa kwechinguva. Michael naFred havana kugara vaine baba / mwanakomana chisungo. Michael Fred Phelps II akaroora amai vaMicheal muna 1973.
Vabereki veOlympian vaive vanofarira chikoro chepamusoro asi vakazopatsanurana muna 1994. Fred akapedza makore makumi maviri nemasere seMaryland State Trooper asati abva pachigaro ichocho muna 28. Iye zvino anoshanda mukutengesa mota.
Kunyangwe makore vasina kutaurirana, vaviri ava vakawana yavo nzira yekudzokera kune mumwe nemumwe. Muna 2014, akakoka baba vake kumhuri vhiki, uko vaviri vacho vakambundirana uye vakave nenguva chaiyo.
Mufananidzo wababa veOlympian, Michael Fred Phelps II.
Zvimwe Zvizhinji nezvaMichael Phelps Amai - Deborah Sue "Debbie" Phelps:
Amai vaMicheal, Deborah, anogona kunge ari mumwe wevanonyanya kuratidza mamamu. Kubva pamisangano yechikoro chesekondari kusvika kumitambo yekumisikidza maOlimpiki. Akanga aripo kuburikidza nezvose. Debbie akatsigira Phelps apo aida kutarisa nhangemutange nhanho panguva yekudya kwemanheru.
Gare gare, aizomukurudzira kuti adzidze kubva pane zvaakakanganisa. Akave ari amai vasina murume kubva paakarambana naMichael Fred Phelps II. Kubudirira kwake mukurera vana vake vega kurudziro kune vazhinji.
Deborah Phelps ndiye mukuru weBaltimore's Windsor Mill Middle School. Akave ari mubairo-anokunda mudzidzisi kweanoda kusvika makumi matatu emakore. Kudzidziswa kwake semudzidzisi kwakamubatsira kubatsira mwanakomana wake, Michael, nekutarisa kwake kushomeka kwehutano hwehutachiona (ADHD).
Debbie Phelps nevanasikana Whitney, kurudyi, naHilary vachiona mwanakomana Michael achituhwina.
Michael Phelps Biography - Vanun'una:
Phelps Aigara Akatarisa Kumusoro Kune Masisita Ake & Anogara padyo navo. Ivo vakaita yakawanda yekutarisa pamusoro paMichael, futi. Chokwadi, sekushambira kunoenda, Michael hapana chimwe chaaiziva kunze kwekunyanya kutarisisa pamutambo.
Dai hanzvadzi dzake dzaive nungo, pamwe angadai asiri kuita zvaari kuita. Asi haana kuziva imwe nzira yekuzviita. Vose vatatu hama dzave dzakatsigira zvakaenzana kuburikidza nemakore, zvese mukati nekunze kwemvura. Ona zvimwe nezve hupenyu hwavo pazasi.
Phelps Aigara Akatarisa Kumusoro Kune Masisita Ake & Anogara padyo navo.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Michael Phelps Sista - Hilary Phelps Eldridge:
Hilary Phelps akashanda mukudyidzana neruzhinji uye vezvenhau kubvira 2002. Akavamba kambani yake yevatapi venhau, GJ Media Group, muna 2013. Zita rekambani iri rinomirira "Mufaro Wechokwadi." Iye anogara muWashington, DC
Ivo vanobatsira vanhu nemakambani nekumaka. Moreso nekugadzira mazano ezvechivanhu uye zvetsika midhiya. Asati atanga yake kambani, Eldridge akashanda seyehukama neruzhinji nemushambadzi wezano re SDS / Prime Group kubva muna 2002 kusvika 2005.
Mufananidzo waMichael Phelps 'hanzvadzi yekutanga - Hilary Phelps Eldridge.
Shure kwaizvozvo, akashanda seMitezo yeLungu uye Chiitiko Murongi. Kubva 2009 kusvika 2016, anga ari wedhairekita murongi weMichael Phelps Chikoro. Panguva iyoyo, akabatsira Michael Phelps Foundation pakurwisa kubatana.
Iko kudyidzana kwaive neVakomana & Vasikana Kirabhu yeAmerica. Mukubatana neSpecial Olimpiki International. Hilary Phelps Eldridge saizvozvo akashambira mukoreji aine makore mana kudzidza.
Hilary Phelps akaroora Doug Eldridge, anoshanda naye kuDLE Agency. Akaenda kuYunivhesiti yeRichmond. Hilary akawana Sociology, Criminal Science degree. Akaputsa zvakafanana zvinyorwa zvina zvekuchikoro, kusanganisira imwe mu200m butterfly.
Hilary Phelps akaroora Doug Eldridge.
Zvizhinji Nezve Michael Phelps Sista - Whitney Phelps Flickinger:
Michael Phelps naHilary Phelps Eldridge havasi ivo chete vanoshambira mumhuri vanokunda mune 200-mita shavishavi. Whitney Phelps Flickinger aishambira kushambira panguva yake paUniversity yeNevada – Las Vegas.
Whitney Flickinger Swam muKoreji. Akakunda pa200-Meter Butterfly. Flickinger akamboisa marekodhi eAmerica mumadzimai mazana maviri ekubhururuka ne200: 1. Ivo zvakare vakamutumidza kuti UNLV Rookie yeGore panguva yake nyowani mwaka.
Pamakore gumi nemana, Eldridge akabuda mukwikwidzi wenyika mu14m butterfly. Flickinger akaedza kukwikwidza timu yeOlimpiki muna 1996 na2000. Kunyangwe asina kuzviita. Zvichakadaro, mukoma wake akagadzira iro 2000 timu paakange achingova 15 makore ekuberekwa.
Mufananidzo waMichael Phelps 'hanzvadzi yechipiri - Whitney Phelps Flickinger.
Zvakare, haasi iye chete mumutambo wemvura. Whitney saizvozvowo akamhanya mu2012 ING New York City Marathon, aine mukoma wake akatarisa padivi. Hilary zvakare akatora chikamu mu5K. Whitney akamhanya zvakaenzana marathon ya2009.
Flickinger ikozvino HR Nyanzvi uye anotora vanhu kuMarGenics, Inc. muRockville, Maryland. Naiyewo akashanda semushandirwi kuThe Henry M. Jackson Foundation yeKufambira Mberi kweMishonga yeMasoja kubva ku2010 kusvika 2016. Kunze kwezvo, akaroora nevana.
Zvimwe Zvakawanda Nezve Michael Phelps Hama:
Trailblazing Olimpian ane hama. Kunze kwababa vake, amai, uye hanzvadzi. Michael Phelps ane mashoma mashoma emhuri. Ana babamunini, vanatete, vazukuru, mukuwasha nasekuru nasekuru.
Saka nekudaro, Michael Phelps ane hama uye anogovera yakawanda nguva navo. Zvakanaka, zvekucherechedzwa vatezvara vake (Doug Eldridge naFlickinger). Iye kunze kweizvozvo ane hama dzekurera, anonzi Shane Lee (weCricketer) naGrant Lee.
Michael Phelps, mwanakomana wake Boomer nemukuwasha wake, Doug Eldridge.
Michael Phelps Hupenyu hweMunhu:
Isu tinoziva Phelps nekutsungirira kwake uye kuisa pfungwa mudziva. Anoshambira zviuru makumi maviri emamita pane mamwe mazuva. Phelps anofarira kudzidzisa. Haana kumbogutsikana. Shasha iyi murume wenguva dzose wekutandara kunze kwedziva.
Zvekare, Phelps anofarira kuseka uye kupusa pamwe nevamwe pachikwata, zvinova zvakasikwa mumhepo ino. Munguva yake yekusarudzika, Phelps anofarira kutamba mitambo yemavhidhiyo.
Anoita kuoneka Speedo. Phelps, kunze kwaizvozvo, anoshanda semutauriri wenyika weVakomana neVasikana Kirabhu yeAmerica.
Michael Phelps Workouts - anoshanda mukuomarara, hunyanzvi hwedzidzo.
Gare gare muhupenyu, akadaro, angade kuve nebasa rekushambadzira mumitambo. Anotaura achivimba kuti kubudirira kwake semumhanyi mumhanyi kwaizosimudzira chimiro chemutambo.
Imwe yeanangwa ake makuru ndeyekuvandudza ruzivo rwake rwemutambo. Vashoma vanhu vanoziva nezve kushambira. Anotarisira kutora chiitiko ichi kuenda padanho nyowani, senge nhabvu kana basketball. Uyezve, Michael Phelps anotora mukana wevezvenhau.
Munguva yake yekusarudzika, Phelps anofarira kutamba mitambo yemavhidhiyo.
Ipuratifomu inomubatsira kubvarura mukaha nevateveri vake. Moreso, anogovera mafoto kubva kune kwake kudzidziswa, zvidimbu zvekuita kwake uye zvirikuuya zvirikuitika. Phelps inoshanda pa Instagram, Twitter, Facebook uye YouTube. Tinogona kusvika kwaari kuburikidza neyake Website.
Michael Phelps Mararamiro:
Parizvino, shasha yemitambo yemvura yakafadzwawo nezvibereko zvebasa rake. Munguva yenguva dzake dzekare, amai vake vanomutendera kuti atenge chimwe chinhu neahwina zvake. Iye achamugonesa iye nguva dzese paanogadzira rekodhi nyowani yenyika. Imwe yekurapa yaive 47-inch terevhizheni yeimba yake yekurara.
Imwe nguva, akaisa nyowani subwoofer masipika muEscalade kuti agadzire iri nani mabass kurira kwenziyo dzaanofarira rap. Nekudaro, gare gare, Michael Phelps akatenga mota yeCadillac Escalade yemitambo.
Akatenga mota ne $ 25,000 bhonasi yaakawana kubva kuUS Swimming Federation paakatanga kutyora marekodhi epasi rose muna 2003. Dzimwe mota dzake dzinosanganisira Mercedes-Benz SL63, BMW 760 Li, Aventador Roadster neRange Rover.
Mutambi weOlympic Gold Medal Michael Phelps anoedza iyo itsva Aventador Roadster muLas Vegas.
Phelps akatengesera imba muna 2018, iyo yaakatenga muParadise Valley, Arizona, muna2015 kuti awane purofiti inosvika US $ 1 miriyoni. Phelps akatengesa imba yeguta yeBaltimore neUS $ 916,000 muna2016. Akaitsiva neimwe chivakwa, zvakare muParadise Valley.
Nhoroondo yeOlimpiki Michael Phelps ari kurarama muumbozha. Muna Zvita, mumhanyi akahwina munhoroondo yeMitambo akatenga imba inoita $ 2.53 mamirioni muParadise Valley, Arizona, padyo nenzvimbo yake yekudzidzira yeRio de Janeiro.
Phelps '$ 2.53 mamirioni epamba muParadhiso Valley, Arizona.
Nemenduru makumi maviri nemasere, makumi maviri nematatu acho ari goridhe, kubva muna 28, Celebrity Net Worth anofungidzira mambure ake anosvika madhora makumi masere emadhora. Saizvozvo, Phelps anowana $ 23 gore rega. Iye ndiye akapfuma kwazvo weOlympian ari mupenyu, achikwira varume vakaita saUsain Bolt uye Roger Federer.
Mazhinji emari idzi dzaanowana kubva pane zvaakatsigira uye madhiri ekutsigira. Akaitawo mari semunyori uye anoonekwa pa-screen.
Phelps akaita zvibvumirano zvakawanda zvinobata nema brand, aine mamwe mazita mahombe anosanganisira Visa, Kellogg's, Colgate, Omega uye Subway. Muna 2008, Phelps akawana $ 1 miriyoni bhonasi kubva kuSpeedo mushure mekutora menduru sere dzegoridhe kubva kumaBeijing Olimpiki.
Kunze kwezvo, mucherechedzo uyu anga ari iye akamutsigira kubvira 2001. Zvinoenderana nechinyorwa cheLa Times, chibvumirano chaPhelps neSpeedo chakapera muna2013. Zvisinei, iyo chaiyo saizi yechibvumirano haina kutaurwa.
Kubvumidzwa kwaMichael Phelps kwemaOmega watches kunopa pfungwa yehunhu hwepamusoro uye kuita kwepamusoro.
Chirevo cheThe Street chinoratidza kuti Phelps akawana mamirioni mashanu emadhora kubva kubvumo. Kutengesa kunze kwenzvimbo yake, Phelps akaonekwawo mune yakasarudzika brand Louis Vuitton mushandirapamwe wepakati Beyond Iyo Limits muna 5.
Moreso, sekureva kwaThe Street, vakafungidzira kuti Phelps anowana inosvika madhora makumi manomwe nemashanu emadhora. Iyo mambure ndeyekutenda kune rutsigiro uye kushambadzira madhiri aakatora pamusoro pemakore.
Michael Phelps Untold Chokwadi:
Kunze kwemashoko ari pamusoro, pazasi pane mashoma anonakidza echokwadi angafadza fancy yako nezveOlimpiki Goridhe Medalist Michael Phelps Biography.
Chokwadi # 1: Inoshandisa nziyo dze rap kutarisa.
Michael Phelps anoita kuti kurovedzwa kunakidze. Mumhanzi weRap unobatsira Phelps kutarisa pazvinangwa zvake. Pamberi pemusangano wega wega, anoshambira nhanho dzake dzekudziya. Iye anobva achinja kupfeka sutu nyowani ndokuisa mahedhifoni pamberi pake mujaho usati watanga.
Anoda Snoop Dogg, 50 Cent, uye Kucho. Uye zvakare, Iye zvakare anoteerera kumimhanzi mazuva ese iye achityaira kudzidzira.
Pazera ramakore 19, munaNovember 2004, vakamusunga muSalisbury, Maryland. Akanga achityaira akadhakwa. Michael Phelps akabhadhariswa madhora mazana maviri nemakumi mashanu uye akatongerwa kushandira mwedzi gumi nemasere.
Michael Phelps, The Greatest Olympian Yese, uyezve Svutugadzike Pot Nekunwa Booze. Muna 2009, takawana pikicha yake achishandisa pombi yemvura (mudziyo wekusvuta) pamambure. Zvakare zvakare, akasungwa nekuda kwekutyaira akadhakwa munaGunyana 2014.
Phelps murume ane rupo mukudzorera kunzanga. Muna 2008, mushure meOlympics muBeijing, Phelps akashandisa bhiriyoni yake $ 1 mamirioni Speedo endorsement bhonasi kuti awane Michael Phelps Foundation. Nheyo dzinotsvaga kukura mutambo wemvura uku dzichikurudzira mararamiro ane hutano.
Kunze kwezvo, makore maviri gare gare, hwaro, pamwe chete naMichael Phelps Swim Chikoro uye KidsHealth.org, yakagadzira iyo 'im' chirongwa cheVakomana neVasikana Club nhengo kusimudzira hupenyu hwakanaka pakati pevana kuburikidza netsika yekushambira.
Michael Phelps achitaura nezve hwaro hwake.
Michael Phelps Biography Pfupiso:
Kuhwina goridhe kuOlympic kunonetsa zvakaoma. Kuhwina 23 !!! Inotaura pachayo, asi vanhu havawanzo kuziva kuti aive nechinangwa kumusana kwake nguva dzese Phelps paanoshambira. Nhangemutange yega yega yaipesana neyakanakisisa.
Hapana mupikisi akashambira pazviitiko zvakawanda saiye, kusanganisira iyo 400 IM, chiitiko chakaomesesa chekushambira. Michael Phelps akavakwa kuti ave kushambira.
Akapasa vamwe vake vekuAmerican Mark Spitz rekodhi yemamenduru egoridhe mune imwe Olimpiki.
Vazhinji vevakwikwidzi vake vakangoshambira zviitiko zviviri zvakanyanya muBeijing. Zvichakadaro, Phelps akashambira masere. Zviitiko zvakawanda zvine prelims, semis, uye zvekupedzisira. Ndiko kumhanya kwakawanda. Uye pakupedzisira, akachengeta kutonga kwake pamusoro pemakore gumi nematanhatu.
Kwatiri, ndiye mutambi ane mukurumbira, Olympic kana imwe nzira, yenguva dzese. Kuti utarise, shandisa tafura iripazasi kuti uwane ruzivo rwakajeka nezve vedu vekuAmerican vekare vaikwikwidza kushambira Biography.
Zita rizere: Michael fred phelps ii
Zita rekudanwa: "Iyo Baltimore Bullet" uye "Kubhururuka Hove"
Nzvimbo yekuzvarirwa: Baltimore, Maryland, US
Basa: Aimbove anokwikwidza kushambira.
Kurohwa Butterfly, medley yega, yakasununguka, backstroke
Kirabhu: North Baltimore Akira Club
Mudzidzisi: Bob bowman
Dzidzo: Rodgers Forge Elementary, Dumbarton Middle School, uye Towson High Chikoro.
Baba: Michael Fred Phelps
Amai: Deborah Sue "Debbie" Phelps (née Davisson)
Hanzvadzi konama: Shane Lee (Mutambi wekiriketi), Grant Lee
Sisters: Whitney Phelps (kushambira), Hilary Phelps
Hama: Bernard Jesse Davisson (Sekuru Vanasekuru), John William Phelps (Sekuru Vasekuru), Leoma / Leona Mae Foote (Ambuya Vamai) Roberta Marie Myers (Ambuya vaBaba)
Mumwe: Nicole Johnson (m. 2016),
Mwanakomana (s): Boomer Robert (2016), Beckett Richard (2018) naMaverick (2019)
Hobbies: Mumhanzi, Vhidhiyo Mitambo
kukwirira: 6 ft 4 mukati (1.93m)
Weight: Makirogiramu 88 (194 lbs)
Net Worth: $ Miriyoni 80
Muhoro: $ Miriyoni 9.3
Dzinza / Race: Yakavhenganiswa (Chirungu, ChiIrish, ChiScotish, ChiWales uye ChiGerman)
Michael Phelps mutambi uyo akaunza kutarisisa kwepasirese kumitambo yemvura. Akawana kutariswa kwakanyanya paakabuda mukukunda panhamba yakatarwa yemenduru dzegoridhe kumaOlimpiki muna 2008. Phelps akawedzera kuhuwandu hwake kumaOlimpiki muna 2012 uye na2016.
Zvakare, pakupera kwemitambo ye2016, akawana menduru makumi maviri nemasere, kusanganisira mucherechedzo wegoridhe makumi maviri nematatu. Tinotarisira kuti iwe wakadzidza zvidzidzo zvishoma mukuvhara Michael Phelps's Biography uye Yehucheche Hupenyu Hupenyu.
Pakupera kwemitambo ye2016, akawana mamenduru makumi maviri nemasere, kusanganisira mucherechedzo wegoridhe makumi maviri nematatu.
Kunyangwe yake inonakidza yebasa trajectory, akachengetedza pfungwa yeFocus par kugona. Iye akatevera kuburikidza neiyo mwero wekugona kuburikidza nebasa rake rakaoma.
Anoenderera mberi achidaro kuburikidza nedzidziso yake. Zvakanaka, ndatenda zvakare nerutsigiro ruzere kubva kumhuri yake, kunyanya amai vake.
Michael Phelps aigona kudzidza pasina nguva izvo zvingatora vamwe kwenguva yakareba. Tinotenda kuti iwe wawana iyi Biography inonakidza. Nyorera zvimwe zvebhaibheri chokwadi neyekutanga-kirasi mhando.